BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/30/20080အကြံပြုခြင်း
အမေရိကန် စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီတွေ မြောက်ကိုရီးယားကို ရောက်ရှိ
Kurt Achin’s Report in Burmese
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အငတ်ဘေးနဲ့ ကြုံနေရသူတွေအတွက် အကူအညီတွေ
ရောက်လာပါပြီ။ အမေရိကန်နိုင်ငံက ထောင်သောင်းချီ တန်ချိန်ရှိတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေ
သယ်ဆောင်လာတဲ့ သင်္ဘောဟာ မြောက်ကိုရီးယားဆိပ်ကမ်းကို ဆိုက်ရောက်သွားပြီ
ဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ WFP ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့တို့ကြား သဘောတူညီမှု
ရရှိအပြီး အခုလို စားနပ်ရိက္ခာတွေ ရောက်ရှိသွားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း
ဆိုးလ်မြို့ကနေ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် ကာ့တ် အာရှင်း (Kurt Achin) သတင်းပေးပို့
ထားတာကို ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဂျုံတန်ချိန် ၃၇,၀၀၀ တင်ဆောင်လာတဲ့ အမေရိကန်သင်္ဘောဟာ မြောက်ကိုရီးယားက
နမ်ပိုး (Nampo) ဆိပ်ကမ်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ဆိုက်ရောက်သွားပါပြီ။ ဆင်းရဲ
နွမ်းပါးနေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို စားနပ်ရိက္ခာ တန်ချိန် ၅၀၀,၀၀၀ လောက်
အမေရိကန်က ပို့ပေးဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့အထဲက ပထမဆုံးအသုတ် ရောက်ရှိသွားတာ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်တုန်းကပဲ ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်အနေနဲ့ မြောက်
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ဖို့ သဘောတူစာချုပ်
ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုလိုက်နိုင်တာ အငတ်ဘေးကြုံနေ
ကြရတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းတခုပဲလို့ WFP ရဲ့ အာရှ
တိုက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပေါလ် ရစ္စလေ (Paul Risley) က
“အခုလို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် ၀န်ထမ်းတွေ ပိုခန့်နိုင်မယ်၊ နောက် အခု
လောလောဆယ် ကျနော်တို့ ကျွေးမွေးထောက်ပံ့နေတဲ့ လူ ၁ သန်းစာထက်ပိုပြီး
လူပေါင်း ၅ သန်းလောက်အထိ အစားအစာတွေ ထောက်ပံ့ကျွေးမွေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းမှုတွေအပြင် ပြင်ပ
ကမ္ဘာနဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ထားခဲ့တာတွေကြောင့် တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ
စားနပ်ရိက္ခာ ရှားပါးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွေမှာတော့ အခြေအနေ
တွေ ပိုဆိုးလာပါတယ်။ လူပေါင်း ၁ သန်းလောက် အငတ်ဘေးကြောင့် သေဆုံးခဲ့ကြရပါ
တယ်။ အစားအစာနဲ့ လောင်စာဆီအတွက် သစ်တောတွေ ဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့ကြရာက
သစ်တောတွေပြုန်းတီးပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မိုးများ၊ ရေကြီးတဲ့အဖြစ်နဲ့ ကြုံခဲ့ကြတာကြောင့်
ဒီနှစ် စိုက်ပျိုးရေးကို လာထိခိုက်ပြန်ပါတယ်။
သောကြာနေ့က ရရှိခဲ့တဲ့ သဘောတူညီချက်ကြောင့် လောလောဆယ် မြောက်ကိုရီး
ယားနိုင်ငံမှာ WFP ၀န်ထမ်း ၁၀ ယောက်ရှိရာက ရှေ့တနှစ်အတွင်း ၀န်ထမ်း ၅၀ အထိ
တိုးမြှင့်ခန့်ထားနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နဂိုက သွားရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ နေရာ
တွေကိုလည်း WFP ၀န်ထမ်းတွေ သွားရောက်ခွင့်ရကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ အချိန်အခါ ဖြစ်နေတာကြောင့်
အရင်က ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ထားခဲ့တဲ့ မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရ
ရဲ့ သဘောထားကို ပျော့ပြောင်းသွားစေတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မစ္စတာ ရစ္စလေက ပြောပါ
“မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအတွင်းမှာ နိုင်ငံတကာက ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်မှုတွေကို
လမ်းကြောင်းပိုဖွင့်ပေးဖို့ သဘောပိုပေါက်လာကြပုံ ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစားအစာ
တနင်္ဂနွေနေ့က အမေရိကန် စားနပ်ရိက္ခာသင်္ဘော မြောက်ကိုရီးယားကို ရောက်သွားတဲ့
ကိစ္စကလည်း WFP နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ သဘောတူညီချက်ထဲမှာ ပါဝင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့
“WFP နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရကြား သဘောတူညီမှု မရမချင်း အမေရိကန်က ဒီ
စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီတွေပေးဖို့ ၀န်လေးနေခဲ့ပါတယ်။”
စားနပ်ရိက္ခာ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသူကို ထောက်ပံ့နိုင်အောင် ဒီရိက္ခာတွေ ဖြန့်ဖြူး
တာကို WFP အဖွဲ့ကိုယ်တိုင် အနီးစောင့်ကြည့်ခွင့်ရှိမှ WFP က စားနပ်ရိက္ခာတွေကို
ဖြန့်ဖြူးတယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒရှိပါတယ်။ အနီးကပ် စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲ ပေးပို့ခဲ့တဲ့
အရင်က အကူအညီတွေဟာ မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်နဲ့ တခြား နိုင်ငံရေး အထက်
တန်းလွှာတွေ လက်ထဲကိုပဲ ရောက်သွားတယ်လို့ အမေရိကန်ဘက်က စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ
တောင်ကိုရီးယားကတော့ လောလောဆယ် မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကို စားနပ်ရိက္ခာ
အကူအညီတွေ ပေးပို့ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ နျူကလီးယား
လက်နက် အစီအစဉ်ကိစ္စ တိုးတက်မှုရှိလာတာနဲ့အမျှ အဲဒီအခြေအနေဟာ မကြာခင်မှာ
ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။ အစားအစာတွေ ပေးပို့ခြင်းမရှိပေမယ့် တောင်ကိုရီးယားက
မြောက်ကိုရီးယားကို ဒီ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကူအညီတွေ
ဆက်ပေးနေပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ WFP ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အများစုအတွက်
တောင်ကိုရီးယားက ငွေကြေးအရ ထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ WFP ကမ္ဘာ့
မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်ရန် ဥရောပ ပါလီမန် အမတ်များ ဖွဲ့စည်း
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွေ အတွက် ပိုမိုအလေးပေးဆောင်ရွက်နိုင်ဘို့အတွက် မြန်မာ့အရေး ဥရောပ ပါလီမန် အမတ်များအဖွဲ့ European Parliamentary Caucus on Burma (EPCB) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပ နိုင်ငံ (၈) နိုင်ငံက ပါလီမန်အမတ်များနဲ့ ဇွန်လ (၁၉) ရက် နေ့က ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ၊ အခုလိုEPCB ဖွဲ့စည်းခဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘဲလ်ဂျီယံ နိုင်ငံအခြေစိုက် ဥရောပမြန်မာရုံးရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှုး ဦးဟန်ညောင်ဝေက အခုလို ပြောဆိုပါတယ်။
"ဘာကြောင့် ဒီအဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်တာလဲဆိုတော့ အရင်တုန်းကဆိုရင် အဖွဲ့မရှိဘူး။ အရေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာ တယောက်နဲ့ တယောက်လိုက်ညှိရတယ်ဆိုတော့ အချိန် နည်းနည်းကြာတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အတွက်။ အခုလိုမျိုး သူတို့ကလည်း အာစီယံက AIPMCအဖွဲ့ပုံစံလိုမျိုး ဥရောပ သမဂ္ဂမှာရှိတဲ့ ပါလီမာန်အမတ်တွေ တစုတစည်းထဲဖြစ်အောင် ဒီမှာ အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖွဲ့လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာက အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ အားရှိမယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် အဖွဲ့အစည်းရှိတော့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကို တချိန်လုံး စောင့်ကြည့်မယ်။ လိုက်ပြီးတော့ သတင်းတွေ စုစည်းမယ်။ ပြဿနာ ပေါ်လာရင်လည်း သူတို့က ချက်ခြင်းတုန့်ပြန်နိုင်တယ်။ အရင်ထက်ကထက် ပိုမြန်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလောက်ပါပဲ။ သာမန်အနေနဲ့ကတော့ ပေါ်လစီချလို့မရဘူး။ လူထုရဲ့ ဆန္ဒကို အစိုးရသိအောင် သူတို့ လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ အစိုးရကလည်း သူတို့ရဲ့ လူထုဆန္ဒကို မဆန့်ကျင် ချင်ဘူးဆိုရင် ပါလီမန်ပြောတဲ့အတိုင်း သူတို့ လိုက်လုပ်မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဥပဒေအရတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်အရ လူထုရဲ့ ဆန္ဒကို နားထောင်ရမယ်ဆိုတော့ အစိုးရတွေကတော့ နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။"
ဒီလို မြန်မာနိုင်ငံအရေး ဥရောပ ပါလီမန် အမတ်များအဖွဲ့ ကို AIPMC မြန်မာ့အရေး အာဆီယံပါလီမန် အမတ်များ အဖွဲ့ကလည်း ကြိုဆိုလိုက်ပြီး၊ မြန်မာ့အရေးအတွက် EPCB နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ ထိရောက်တဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်တွေကို လုပ်ကိုင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ AIPMC အမှုဆောင် ညွန်ကြား ရေးမှုး Roshan Jason က ပြောဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ မြန်မာ့ရေး ဥရောပ ပါလီမန် အမတ်များ အဖွဲ့ EPCB ဟာ အာဆီယံ အမတ် များ အဖွဲ့ AIPMC ထက်တော့ မြန်မာ့အရေးကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့လဲ ဦးဟန်ညောင်ဝေ က ပြောဆိုပါတယ်။
"AIPMCထက်တော့ ပိုလုပ်နိုင်မယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် အာစီယံနိုင်ငံတွေ အကုန်လုံးက ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥရောပ သမဂ္ဂထဲမှာက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၂၇နိုင်ငံ။ ဆိုတော့ လူထုရဲ့ ဆန္ဒကို သူတို့က ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ထုတ်ပြမယ်။ လူထုဘယ်လို မြင်သလဲဆိုတာကို အစိုးရတွေက လိုက်နာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။"
EPCB အနေနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ဘို့ အတွက် ဥရောပနိုင်ငံ အစိုးရတွေနဲ့ ဥရောပ သမဂ္ဂ တို့ကို ဖိအားပေးယုံမက တခြားနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ တို့ကိုပါ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ တိုက် တွန်း ပြောဆိုမှုတွေကို အဓိက လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်လုပ်ကိုင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်ရှင်။
အထိန်းသိမ်းခံ အန်န်အယ်လ်ဒီလူငယ်တွေ လွှတ်ပေးရေးတောင်းဆို
အန်န်အယ်လ်ဒီရုံးချုပ်ရှေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုနေကြသော အန်န်အယ်လ်ဒီ
ပါတီဝင်များ။ ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၀၈။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၉ ရက်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့က အန်န်အယ်လ်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ်ရှေ့မှာ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဆုတောင်းနေကြတုန်း အရပ်ဝတ်နဲ့လူတွေ အတင်းဝင်ဖမ်းတာခံခဲ့ရတဲ့ အန်န်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အန်န်အယ်လ်ဒီဥက္ကဋ္ဌက မြန်မာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီကို ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့စွဲနဲ့ စာတစောင်
ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေက ဖမ်းတာမဟုတ်ဘဲ အဲဒီလူတွေရှေ့မှာတင် အရပ်ဝတ်နဲ့လူတွေက အတင်းဝင်ရောက် ထိုးကြိတ်ဖမ်းဆီးတာဟာဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာနဲ့ ဆန့်ကျင်နေပြီးဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်တာကြောင့် အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိတော့ အစိုးရဘက်က ဘာမှအကြောင်းပြန်ကြားတာ မရှိသေးပါဘူးအဲဒီနေ့က ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့သူတွေဟာ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဝင်တွေနဲ့ စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ အန်န်အယ်လ်ဒီရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ရဲအထူး
သတင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ လုံခြုံမှုထိန်းသိမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှေ့မှာပဲ ၀င်ဖမ်းခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေက ဟန့်တားထိန်းသိမ်းတာ မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
အန်န်အယ်လ်ဒီ တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်
ခဲ့လို့သာ ပြဿနာဟာ ပိုကြီးထွားမလာဘဲ အေးအေးချမ်းချမ်း ပြီးဆုံးသွားခဲ့တာ
အခင်းဖြစ်ပြီး ၆ ရက်အကြာ၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရအန်န်အယ်လ်ဒီဥက္ကဋ္ဌက လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စာကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဆီ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ပေးပို့ခဲ့တာပါ။ ခုချိန်ထိတော့ အကြောင်းမပြန်ကြားသေးဘူးလို့ အန်န်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ကဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“အခုအချိန်ထိတော့ အကြောင်းပြန်ကြားတာ တခုမှမရှိသေးပါဘူး။ လောလောဆယ်
သူတို့မိသားစုတွေဆီကိုရော၊ ကျနော်တို့ရုံးကိုရော ဘာမှ အကြောင်းပြန်ကြားတာ
ဒါ့အပြင် ဖမ်းဆီးသွားသူတွေကို ဘယ်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်၊ သူတို့ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်
ဆိုတာတွေကိုလည်းဘာမှမသိရသေးပါဘူးလို့ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ စကတည်းကိုက ဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်တဲ့အတွက်မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါလို့လည်း သူကပြောပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အဖမ်းခံထားရသူတွေ ပြန်လွတ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
“ထိန်းသိမ်းခေါ်ဆောင်သွားပြီးရင်လည်း မိသားစုတွေဆီ၊ သို့မဟုတ် အဖွဲ့က တာဝန်
ရှိတဲ့လူတွေဆီကို အကြောင်းကြားရမယ်။ ဒါပေမယ့် အခုထိ ဒါတွေကို သူတို့ဘက်က
ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူး။ တခုတော့ ပြောစရာရှိတာပေါ့။ မေလ ၂၇ ရက်နေ့တုန်းက
ကျနော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တချို့ သူတို့ရဲ့ သဘောဆန္ဒအတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
လွတ်မြောက်ဖို့ လမ်းလျှောက်ချီတက်ကြတယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ ဖမ်းဆီး
ထိန်းသိမ်းခဲ့တာပဲ။ နောက် နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါ သူတို့ စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး
ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်။ အခုကိစ္စမှာလည်း ကျနော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေက ဘာမှ အပြစ်မရှိတဲ့
အတွက် သူတို့ စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးရင် အချိန်အတိုင်းအတာတခုအတွင်းမှာ ပြန်လွှတ်ပေး
လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့တော့ ယုံကြည်ပါတယ်။”
အန်န်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဝင်းနိုင် ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
မေလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ဇွန်လ ၂၆ ရက်
နေ့ အေအက်ဖ်ပီသတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့
ဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က တစုံတရာ
သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဆေးဝါးကုသရန် လိုအပ်
တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ 30 2008 16:44 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ အကျဉ်းထောင်တွင် ၁၉ နှစ်ကြာ ချုပ်နှောင်ခံနေရသော သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် (ဟံသာဝတီ) သည် ရင်ကျပ်ဝေဒနာ ကို ကုသရန် လိုအပ်နေသည်။
လာမည့် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့ ထောင်ကျသက်တမ်း ၁၉ နှစ်ပြည့်မည် ဖြစ်သည့် ၇၉ နှစ်အရွယ် ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်သည် ထောင်ထဲတွင် ရင်ကျပ် ရောဂါကြောင့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဆိုးရွားစွာ ခံစားနေရသော်လည်း ဆေးဝါးကုသမှု အလုံအလောက် မရှိဟု သူ၏ မိတ်ဆွေများ နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့က ပြောကြသည်။
“စောစောပိုင်း တွေ့တုန်းကတော့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ မဆိုးပေမယ့် အခုတခါကျတော့ ရင်ကျပ်ပြီးတော့ ရီ ရင်တောင် ချွဲသံ ထွက်နေတယ်။ ရီသံ မထွက်ဘဲ ချွဲသံ ရှဲရှဲ ထွက်နေတယ်။ ချွဲသံတွေလည်း ကြားရတဲ့ အချိန်ကျမှ ကျနော် နည်းနည်းတော့ လန့်သွားတယ်။ ထမင်းလည်း မစားနိုင်၊ အိပ်လည်း မအိပ်နိုင်တာ ၄-၅ ရက် ရှိနေပြီဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ပိန်သွားတယ်” ဟု ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့က ဦးဝင်းတင်ကို ထောင်ဝင်စာ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သူ ဦးမောင်မောင်ခင်က ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး “ဘာပဲပြောပြော ဒီအဖိုးကြီး၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမားကြီး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေတဲ့ အကျဉ်းသမား တယောက်ကို ဂရုတစိုက် ကုသပေးသင့်တာပေါ့ဗျာ” ဟု ပြောသည်။
ရင်ကျပ်ရောဂါ ကုသရန်အတွက် ထောင်ဆေးမှူးများက ချွဲပျော်ဆေးကိုသာ ထောင်ပြင်ပက ဝယ်သောက်ခိုင်းနေသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ကိုဘိုကြည်က “အသက်အားဖြင့် ကြီးရင့်နေတဲ့အတွက် သူ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဆိုးရွားလာတာ တွေ့ရတယ်။ တကယ်တမ်းဆို သူလွှတ်ဖို့ အချိန်တန်နေပြီ။ လွှတ်ဖို့အချိန်ကလည်း တော်တော်နီးလာပြီ။ လွှတ်ပေးမယ် ဆိုပြီးတော့ မလွှတ်ပေးဘဲ နအဖ အနေနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်တာတွေ၊ ညှင်းဆဲ တာတွေ ရှိတယ်ဆိုတော့ သူ့အသက်အန္တရာယ်ကို အတော်လေး စိုးရိမ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
သူက “ထောင်အာဏာပိုင်တွေက လူနာတယောက်ကို လုံလောက်တဲ့ စမ်းသပ်မှုမျိုး မလုပ်ဘဲနဲ့ ပြီးစလွယ် လွယ်လွယ်ပဲ ပြောလေ့ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမားတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အပြင်ကို ထုတ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူတဲ့အတွက်၊ အချိန်မီ ဆေးဝါးကုသခွင့် မရတဲ့အတွက် ပြဿနာ အများကြီး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်” ဟု ဆက်ပြောသည်။
ယခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အူကျရောဂါ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံခဲ့ရသေးသည်။
၁၉၉ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်နှင့်အညီ လွှတ်တော် ခေါ်ယူရေး အပါအဝင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ပြန်လွှတ် ပေးကာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန်အတွက် ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်သည် ထောင်ဝင်စာ တွေ့ဆုံသူမှတဆင့် နအဖ စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုလေ့ရှိသူ ဖြစ်သည်။
ဟံသာဝတီ သတင်းစာကို ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် မဆလ အစိုးရက ပြည်သူပိုင် သိမ်းခဲ့ပြီး၊ အောက်မြန်မာပြည်မှ မန္တလေးသို့ ပြောင်းရွှေ့ အခြေစိုက် သော ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် အယ်ဒီတာချုပ် ဖြစ်လာကာ သတင်းစာသည် ထိုအချိန်က ပါတီ၊ ကောင်စီ၏ မှားယွင်း ချွတ်ချော်မှုများကို ခေါင်းကြီးပိုင်း နှင့် ဆောင်းပါးများဖြင့် ဝေဖန်ထောက်ပြကာ ပြည်သူလူထု နစ်နာချက်များကို ဖော်ပြခဲ့သဖြင့် ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် မဆလ အစိုးရက သတင်စာ ထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်ခဲ့ပြန်သည်။
ဆရာကြီးသည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်စက တတ်သိပညာရှင် အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေး အကြံဉာဏ်ပေး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရက ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ထောင်တွင်းပြစ်ဒဏ် ၃ ကြိမ်ထက်မနည်း ချမှတ်ခဲ့သလို၊ လွှတ်ချိန်တန်သော်လည်း ယခုအချိန်အထိ ဖမ်းဆီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆရာကြီးကို ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်တွင် ယူနက်စကို အဖွဲ့ကြီးနှင့် ကမ္ဘာ့သတင်းစာများအဖွဲ့က ဦးဝင်းတင်၏ သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်ဆု (UNESCO/ Guillermo Cano World Press Freedom Prize) နှင့် ရွှေကလောင်ဆု (World Association of Newspapers' Golden Pen of Freedom Award) တို့ကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင်မူ နယ်ခြားမဲ့ သတင်းထောက်များအဖွဲ့ (R.S.F) က Winner of Reporter Without Border ဆု ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
မစုစုနွေး ထောင်နံရံကို ခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်
တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ 30 2008 20:00 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ချုပ်နှောင်ခံထားရသည့် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးသည် ထောင်ဝန်ထမ်းများနှင့် စကားများပြီး အုတ်နံရံကို ခေါင်းနှင့် ဆောင့်သဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ရက်က သတိမေ့မျောခဲ့သည်ဟု သူမ၏ ဆွေမျိုးတဦး အပြောအရ သိရသည်။
“အခန်းကျဉ်းထဲမှာ နေရချိန် များလာတဲ့အတွက် နှလုံးရောဂါရှိတဲ့ မစုစုနွေးမှာ အသက်ရှူမဝ ဖြစ်လာလို့ တံခါးဖွင့်ပေးဖို့ ထောင်ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးကို တောင်းဆိုပါတယ်။ ထောင်ဝန်ထမ်းတွေက တံခါးဖွင့်ပေးပေမယ့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်အောင် ပြုမူတဲ့အပေါ် မကျေနပ်တဲ့ အတွက် အုတ်နံရံကို ခေါင်းနဲ့ဆောင့်ရာက သတိမေ့ လဲကျသွားတယ်” ဟု မစုစုနွေး၏ အမဖြစ်သူ ဒေါ်ဌေးဌေးကြည်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
နှလုံးရောဂါ ဝေဒနာရှင် မစုစုနွေးကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်တွင် မြရိပ်ညို ဟိုတယ်ရှေ့တွင် အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး စာတမ်းချိတ်ဆွဲစဉ် အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ သူတို့ကို ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် လူစုလူဝေးတွင် ပါဝင်မှု ပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၇၊ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝမ်ပိပြားမှုကို ပျက်ပြားစေရန် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅(ခ)၊ အစိုးရကို အကြည်ညို ပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။
“သက်သေတွေက တကယ်ပြန်ကြည့်ရင် စာတမ်းချိတ်တာက ဘာမှ အငြင်းမပွားဘူး။ ဒါကတော့ ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး ဆိုပြီးတောင် လုပ်သေးတယ်ဆိုတော့၊ ဝတ်ပြု ဆုတောင်းတာက ဥပဒေနဲ့မှ မငြိစွန်းတာ။ ပထမတော့ စာတမ်း၊ ဆုတောင်းပွဲကိစ္စ ပြီးသွားပြီး၊ ပြန်လုပ် ပေးတယ်” ဟု မစုစုနွေး၏ အကျိုးဆောင်ပေးနေသည့် ရှေ့နေ ဦးမြင့်သောင်းက ပြောသည်။
သူက “မစုစုနွေးကတော့ သူ အမှန်တရားကို လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူက ဘာမှ စိတ်ဓာတ်မကျဘူး။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့လည်း မတရားမှု တွေကို ကျနော်တို့က အမှန်တရားအတွက် လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘာမှ စိတ်ပျက်စရာ မရှိပါဘူး” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၂၅ ရက်တွင် သူတို့နှစ်ဦးအား အင်းစိန်ထောင်အတွင်း အနောက်ပိုင်း ခရိုင်တရားမှ ရုံးချိန်းရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း တရားသူကြီး ဦးဇော်ဝင်းရွှေ ပြောင်းရွှေ့သွားပြီး တရားသူကြီးအသစ် ဦးညီညီစိုး ရောက်ရှိလာသဖြင့် သူက အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးရန် အမိန့်မချသေးဘဲ လာမည့်လ ၉ ရက်နေ့သို့ ရမန်ပေးခဲ့သည်။
90% of foreign investment goes to oil and gas sector
Nanhai drill rig in A3 gas exploration (Photo: Shwe Gas Movement) Burma attracts US$500 million of foreign investment in 2007 and of which US$474 million was in the oil and gas sector.
The United Kingdom led oil and gas investors with US$187 million, followed by India and Singapore.
"Burma is not investing where it should be - 70% of people are farmers and Burma seriously needs investment in agriculture sector", says U Sein Htay, economic analyst based in Washington.
He said investment in oil and gas sector will not benefit the people as the government does not -reinvestment the proceeds into education and health sectors.
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဘ၀၊ လူမှုရေးဘ၀၊ နိုင်ငံရေး ဘ၀တွေအကြောင်းရေးသားထားတဲ့ သတင်းတွေ၊ ဆောင်းပါ:တွေ၊ စာအုပ်စာတမ်းတွေဖတ်ရ၊ လျှပ်တပြတ်ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊ သတင်းဓါတ်ပုံတွေ၊ သတင်းဓါတ်ပုံတွေ၊ဗီဒီယိုကလစ်တွေ၊ဗီဒီယိုဇာတ်ကား၊ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်ရတဲ့အခါတိုင်း ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရ၊ ၀မ်း မြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်လို့ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရ၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ၊ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ရ၊ ဒေါသဖြစ်ရ စတဲ့ မကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကိုပဲ ကြုံတွေ့ ခံစားခဲ့ရ တာချည်းပါပဲ။ အဲဒါတွေရဲ့ အခြေခံအကြောင်းတရားဟာ မှားယွင်းတဲ့အပေါ်ထပ် နိုင်ငံရေးအ ဆောက်အဦ၊ မှားယွင်းတဲ့ အခြေခံစီးပွားရေးအဆောက်အဦ ကြောင့်ပဲဆိုတာလည်းရှင်းနေတာ ပါပဲ။ အပေါ်ဆုံးထပ်နဲ့ အောက်ဆုံးထပ်ကြားမှာရှိတဲ့ ကျန်နေတဲ့အရာ အားလုံးဟာလည်းအလို အလျှောက်မှားယွင်းသွားခဲ့ရ မှားယွင်းနေဆဲပဲ ဖြစ်ရတော့တာပါပဲ။ ဒါလည်း ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမ ဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ အဓိကမှားယွင်းမှုကြီးနှစ်ခုရဲ့ ကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အမှား တွေကိုတကယ်တန်းခါးခါးသည်းသည်း ခံစားနေရတာကတော့ အောက်ဆုံးလွှာကမရှိဆင်းရဲ သားပြည်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီ သန်းပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့ပြည်သူလူထုဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကြီးမားဆုံးစွမ်းအား အကြီးမားဆုံးအင်အားစုကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစွမ်းအားအ ကြီးမားဆုံး အင်အားစုကြီးဟာ အကြီးမားဆုံးဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံစားနေကြရတဲ့သူတွေဖြစ်နေပါ တယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီအင်အားစုကြီးထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အဲဒီ စွမ်း အားအကြီးမားဆုံး အင်အားစုကြီးဟာ ဒီကနေ့ အချိန်မှာ စွမ်းအားမဲ့သွားကြပါပြီလား။ သူတို့ တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေထဲက လွတ်မြောက်အောင် မရုန်းကန်နိုင် မလှုပ်ရှားနိုင် ကြတော့ဘူးလား။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး လို့ကျနောအခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်။ နှစ်ငါးဆယ်နီးပါး စစ်အာ ဏာရှင်တွေရဲ့ သံဖနောင့်အောက်မှာ ရက်ရက်စက်စက်ဖိနှိပ် ညှင်းပမ်းခံရ၊ မျက်စိပိတ်နားပိတ် အလုပ်ခံရလို့ သူတို့မှာ ရှိနေတဲ့ ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားတွေကို အသုံးပြုဖို့ မကြိုးစားရဲအောင်ဖြစ် နေကြရရှာတာပါ။ ကိုယ်စီကိုယ်စီမှာရှိနေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြရရှာတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နွံနစ်နေတဲ့ သမိုင်းဘီးကို တွန်းတင်လွတ်မြောက် အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအမှန်တကယ် ရှိနေတာဟာ သူတို့ပါပဲ။ မှတပါးတခြားမရှိ ၊ကျနော်တို့ရဲ့ သန်းပေါင်းများ စွာသော သာမန်ပြည်သူတွေပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ အငြင်းပွားစရာ မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တော်လှန်ရေးကြီးတခုကို ဖြတ် သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးလို့ပြောလို့ ရသလို နယ်ချဲ့အောက်က လွတ်မြောက်အောင်မဟုတ်ပဲ အမျိုးသားစစ်အာဏာရှင်စနစ် လက်အောက်ကလွတ်မြောက် အောင်တိုက်နေတဲ့ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတော်လှန်ရေးပါ။ နယ်ချဲ့ကိုတော်လှန်တိုက် ခိုက်ရတာ ထက်ပိုပြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်။ အချိန်ကာလကိုပြောမယ် ဆိုရင်တော့ ကျနော် တို့ရဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ အတိုင်းအတာတခုအထိ ဒီတော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းကြုံတွေ့ ပြီးခဲ့ပါပြီ။ အတော်အတန်အတိုင်းအတာတခုထိရင့်ကျက်ခဲ့ပါပြီ။ နောက်ပြီးတော်လှန်ရေးတွေ ပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့ ခေတ်ကာလအရ ဖြစ်စဉ်တွေဟာ ကွဲပြားခြားနားနေပါတယ်။ ဒီကနေ့ အိုင်တီ ခေတ် ကမ္ဘာပြန့်ဖြစ်စဉ်ကာလ(Globalization) မှာအချိန်တွေကိုကြုံ့ကွေးသွားအောင် နည်းပ ညာတွေက စွမ်းဆောင်နိုင်နေပါပြီ။ ကျနော်တို့ သမိုင်းထဲကတော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်ဟောင်း တွေ လောက်အချိန်ယူစရာမလိုပါဘူး။ အချိန်တွေကို ချုံ့ပြီးးအရှိန်အဟုန်ကိုမြှင့်တင်လို့ရတဲ့ ခေတ် ကာလဖြစ်နေပါပြီ။
ကျနော်တို့စိတ်ပျက်အားငယ်စရာ မရှိပါဘူး။ အလုပ်ကိုချက်ခြင်းစဖို့ပဲ လိုအပ် ပါတယ်။ စပြီးပြီဆိုရင်လည်း အရည်အတွက်ရောအရည်အချင်းအရပါ အရှိန်အဟုန်ကိုမြှင့်တင် ပေးကြရပါလိမ့်မယ်။ တော်လှန်ရေးကြီး အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးဆုံးသွားဖို့ ပေါင်းစည်းလို့ ရနိုင် သမျှ အင်အားတွေကို ကျနော်တို့ ပေါင်းစည်းကြရပါမယ်။ ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ရန်သူ ဟာ အင်အားကြီးမားသလို ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ နည်းပရိယာယ်ကြွယ်ဝပြီး ရက်စက်ကြမ်း ကြုတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဟာ အကြမ်းဖက်တာဖြစ်တယ်၊ ရန်သူ ဘက်ကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးလုပ်တာဟာ အကြမ်းဖက်တာဖြစ်တယ်၊ အကြမ်းမဖက်ဆန့်ကျင် တော်လှန်တာသာမှန်တယ် စသဖြင့် အငြင်းပွား ကွဲပြားနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆပါ တယ်။ တော်လှန်ရေးရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရေးအတွက်အသုံးပြုလို့ ရနိုင်သမျှ တော်လှန်ရေးနည်းနာတွေကို သုံးစွဲကြရပါလိမ့်မယ်။ တဦးချင်း တယောက်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တ အုပ်စုချင်းဖြစ်ဖြစ် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဒေါက်ထောက်ကျားကန်ထားသမျှ အရာအားလုံးကို တိုက်ဖျက်ခြေမှုန်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တရာရာတိုင်းကိုငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းချင်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိတည်မြဲဖို့ ကျနော်တို့တွေ တိုက်ခိုက်ဖို့လိုအပ်ရင် တိုက်ခိုက်ရပါလိမ့်မယ်။ အနု နည်းရော အကြမ်းနည်းပါသုံးရပါလိမ့်မယ်။ ရန်သူက သူ့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် အစဉ် တစိုက်အသုံးပြုလာတဲ့ နှိမ်နင်း ဖြေရှင်းနည်းကို ကျနော်တို့မြင်သာထင်ရှား တွေ့ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီ စစ်အာဏာရှင်စနစ် တိုက်ဖျက်ရေး ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကြီး ရှုံးနိမ့်သွားမယ်ဆိုရင်၊ ဒီအတိုင်း စစ်အာဏာရှင်တွေကိုဆက်ပြီး အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားမယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံ ဟာ လုံးဝပျက်သုန်းသွားတော့မယ် အလျှော့ပေးစွန့်လွှတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးသိမြင်သဘောပေါက်ကြဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေ၊ စနစ်တွေ ၊အသစ်အသစ်ပေါ်ပေါက်လာနေ တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ လမ်းကြောင်းတွေ အကြောင်းကို ငြင်းခုန်ဆွေးနွေး သဘောထားကွဲပြား နေကြရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြစ်ပြတ်တိုက်ဖျက်ခြေမှုန်းဖို့သာဖြစ် တယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ တညီတညွတ်ထဲယုံကြည်ထားကြဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျနော့အနေနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ပြီး အားဖြည့်သန့်စင်ဖို့ အတွက် ဖတ်ကြည့်လိုက်မိတဲ့ မဟာမြိုင်တောရဆရာတော်ကြီး ဦးဇောတိကရဲ့“တွေးမိတိုင်း ပျော်တယ်”ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲက ဆရာတော်ကြီးရဲ့ မိန့်ဆိုချက်တခုကို ပြန်ပြီးသတိရမိပါတယ်။ ဆရာတော် ကြီးကတော့ ဘယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းဘယ်တိုင်းပြည်လို့ ထည့်သွင်းမပြောခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်က တော့ ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ကျနော်တို့တိုင်းပြည်လို့ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
“…မတရားတာ၊ မမျှတတာတွေကို လုပ်တဲ့သူတွေများနေရင် တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းဖြစ်နေမယ်။ တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းဟာ လွတ်လပ်မှုရှိတဲ့ အသိုင်းအ ၀ိုင်း ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ပြောနိုင်မလဲ။
မတရားတာလုပ်တဲ့သူရှိရင် ခံရတဲ့သူရှိတယ်။ ခံရတဲ့သူဟာလုပ်တဲ့သူကိုလေး စားမှာမဟုတ်ဘူး။ တဦးကိုတဦးမလေးစားနိုင်တဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းဟာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ အသိုင်း အ၀ိုင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ တရားမျှတမှုမရှိ ၊ ဂုဏ်သိက္ခာလည်းမရှိတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာနေရတဲ့ သူဟာ စိတ်အေးချမ်းသာယာမှု ဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်တော့မလဲ။
လူတချို့ မတရားတာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းဟာ လွတ်လပ်တဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ မလွတ်လပ်တဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းဟာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ဒီသုံးပါးဟာဆက်စပ် နေပါတယ်။ တန်ဖိုးထားစရာကောင်းတဲ့ဒီ(Human values) သုံးပါးမရှိရင် အဆင့်မြင့်တဲ့ လူ့အ သိုင်းအ၀ိုင်းမဖြစ်သေးဘူး…” လို့မိန်းကြားဟောပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့တွေ တရားမျှတမှု မခံစားခဲ့ရသေးဘူး၊ လွတ်လပ်မှုကိုမခံစားခဲ့ရ သေးဘူး၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကတော့ အသေအချာပါပဲ။
ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုကြီးအနေနဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးကြရပါလိမ့်မယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေ နဲ့သူ့ရဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို ကိုယ်စီကိုယ်ငှဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ဖို့ကြိုးစားကြရပါလိမ့်မယ်။ အား လုံးဟာလက်နက်စွဲကိုင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက် အန္တာရယ်မများတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ခုခံဆန့်ကျင်မှုတွေကိုသုံးပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြ ဖို့သာအရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒီအဆင့်ကနေပြီး တဆင့်တိုးတက်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ပိုပြီး ထိ ရောက်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်နိုင်လာကြပါလိမ့် မယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဓမ္မ၀ါဒီ စစ်အာဏာရှင်တွေ မကြာတော့မယ့်အချိန်မှာ ကျ ဆုံး၊အာဏာရှင်စနစ်နိဂုံးချုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ဓမ္မဟာအမှန်တရားဖြစ်တယ၊်သစ္စာတရားဖြစ်တယ်။ ။
posted by http://www.yewintthu.blogspot.com/
pdf file နှင့်ဖတ်လိုပါလျှင်ဒီမှာပါနော်...
Winsor University နှင့်သူတက်နေသည့်ကျောင်းက Partnershipလုပ်ထားသည်..၆လတက်ပြီးလျှင်
မတတ်နိုင်အခု လောက်ဆိုဖိုးညီ တို့စိတ်ပူနေ လိမ့်။ရဲရင့်ဖုန်းခေါ်၍ပူတူးနှင့်ပေး ပြောလိုက်သည်။
်FIDO prepaid card သုံးဖုန်းနီနီလေးတလုံးလက်ဆောင်ဝယ်ပေးသည်။Mcdonaldတွင်နေ့လည်စာစားပြီး
သောကောင်လေးက''I just visit to Canada."ဟုရဲရင့်ကိုပြောသည်။ကွိဘက်၏အနောက်ဖက်တွင်ရဲရင့်တို့Ontarioပြည်နယ်ရှိသည်။အရှေ့ဖက်အခြမ်းသည်ပြင်သစ်လူမျိူးများကအခြေချနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ပြင်သစ်-ကြသည်။ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပုံစံမျိူးဖြစ်သောကွိဘက်ပါတီသည်ခုံ၄၀၀ကျော်ရှိသောပါလီမန်တွင်
new Roller coaster for 2008 in Wonderland........
ပြင်English in Secound language ကိုပါတက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ကနေဒါရောက်လာ
''Two o'clock sir..''....2 to 11 AMOntarioပြည်နယ်တွင်အရက်ရောင်းခွင့်မရှိပေ။
ချစ်တခုနှင့်နှစ်ယောက်စာလုံလောက်သည်။University of Torontoကရဲရင့်နေရာမှလမ်းလျှောက်၍သွားလျှင်
တော့ပြည်သူကအချစ်တော်နအဖဖြစ်သည်။ ။ ဤအချစ်နှင့်အမုန်းနှစ်ခုကြားတွင်ခေတ္တအသက်ရှင်သည်။ ။}}}}}}
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/28/2008 1 အကြံပြုခြင်း
28 June 2008မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အတိုက်အခံတွေ ပါဝင်သင့်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဆွေးနွေးနေကြပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အတိုက်အခံတွေနဲ့ မသင်္ကာသူတွေ အားလုံးကို ဖမ်းဆီး အပြစ်ပေး ထောင်ချတာ ခံနေရာပါတယ်။ အခုဆိုရင် ထိပ်တန်း အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် တဦးလည်းဖြစ်၊ ၀ါရင့်သတင်းစာ ဆရာကြီးတဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ ဆရာ ဦးဝင်းတင်ကို ဒီကနေ့မနက် အင်းစိန်ထောင်မှာ ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့တဲ့အခါ ကျန်းမာရေးသိပ်ကောင်းတာ တွေ့ရတယ်လို့ သူ့ကို တွေ့ခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေ ဦးမောင်မောင်ခင်က ဗွီအိုအေကို အခုလို စ ပြောပြပါတယ်။
မိုးသည်းထန်မှုကြောင့် မိုးညှင်း မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များ ရေမြှုပ်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/28/20080အကြံပြုခြင်း